Myanmar Daily Mail: September 2011
စာဖတ်ပါ ၊ စာကိုဘယ်လိုဖတ်ကြမလဲ။ အတွေးမှတ်စုများ (၅) ၊ အတွေးမှတ်စုများ (၇) ၊ သုညဘ၀နဲ့ စခဲ့ရသော ဘီလျံနာ သူဌေးများ ၊ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိုသူများ အတွက် ကမ္ဘာကျော် အဆိုအမိန့်အချို့ ၊ မြ
စကား စကား စကားထဲက ဇာတိပြ ၊
စကား စကား ၊
မိမိကိုယ် မိမိရိုသေဘို့ လိုတယ် ၊
အတွေးမှတ်စုများ (၅) ၊
အတွေးမှတ်စုများ (၇) ၊
သုညဘ၀နဲ့ စခဲ့ရသော ဘီလျံနာ သူဌေးများ ၊
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိုသူများ အတွက် ကမ္ဘာကျော် အဆိုအမိန့်အချို့ ၊
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံ(ကျမ်းပြုဆရာ ယုဒသန်) ၊
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း လစာအမြင့်ဆုံးရသော အောင်လက်မှတ် ၁၅ မျိူး ၊
မိမိကိုယ် မိမိရိုသေဘို့ လိုတယ်
ဆေးရုံတစ်ရုံမှာ ဆေးကျောင်းသားတစ်စု လူနာကိုလက်တွေ့ စတင်ထိတွေ့ ရမယ့်နေ့ ပေါ့။
သူတို့ တစ်တွေ လူနာ ကုတင်တစ်ခုလုံးကို ပတ်ဝိုင်းပြီးရပ်နေကြတယ်။ ဂျူတီကုတ်ဖြူဖြူတွေကိုယ်စီဝတ်ထားကြပေမယ့် နားကြပ်တော့မပါကြပါဘူး ၊
သူ့ တို့ နားကြပ်တွေကို စစ္စတာရဲ့ အခန်းထဲ ထားခဲ့ရမယ်လို့ ဆရာ ကမနေ့ က မှာထားခဲ့ပါတယ်။
"ကဲ.. ဒီလူနာကိုမင်းတို့ နားထောင်ရမယ့်အကြာင်း ခွင့်တောင်းထားပြီးပြီ ၊ မင်းတို့ သူ့ နှလုံးခုန်သံကို စိတ်ကြိုက်နားထောင်လို့ ရတယ်။ နှလုံးအဆို့ ရှင်ကျဉ်းတဲ့အသံဟာ ဒီလူနာမှာ
သိပ်ကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကြားနေရတယ်။ ဒီလောက်ပီသတဲ့အသံမျိုး ရှားတယ်။'"
ဆေးကျောင်းသားအားလုံးဟာ ဒီနှလုံးအဆို့ ရှင် ကျဉ်းတဲ့ နှလုံးသွေးစီးသံ နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးစာတွေ့ အားဖြင့် လေ့လာမှတ်သားဖူးပြီးသားပါ ။ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ မှာ တစ်ခါမှ မကြားဘူးသေးဘူး။
သီအိုရီ အရပဲ ဘာသံပြီးရင် ဘာသံလာရမယ်၊ ဘယ်လိုကြားရမယ်ဆိုတာ သိထားကြပါတယ်။
ဆရာက သူတို့ ကို နားကြပ် တစ်ခု ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ် ။ "ကဲ…အချိန်ယူပြီးသေသေချာချာနားထောင်ကြ၊သိပ်ကောင်းတဲ့အသံပဲ"လို့ ပြောပြီးကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။
ကျောင်းသားတွေလည်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဆရာ့နားကြပ်နဲ့ နားထောင်ကြပါတယ် ။့ နားထောင်ရင်းခေါင်းညိတ်ကြတယ် ။
"ဟာ…ဟုတ်တယ် ၊ ဟုတ်တယ် ၊ကြားရတယ် ။စာထဲကအတိုင်းပဲ "လို့ တယောက်ပြီးတစ်ယောက်နားထောင်ပြီးကျောင်းသားအားလုံးကပြောကြတယ်။
ပြီးတဲ့အခါ စစ္စတာရဲ့ အခန်းမှာ စာသင်ဖို့ အားလုံးပြန်စုကြ တော့လို့ ဆရာကပြောပြီး၊ ခုဏ ကကြားရတဲ့ အကြောင်းမေးပါတယ် ။
"မင်းတို့ အားလုံးနားထောင်ပြီးကြားခဲပြီလား....." တဲ့ ။
ဆရာကဘာမှ ဆက်မပြောပါဘူး ။ဆရာကသူတို့ ကိုပေးလိုက်တဲ့နားကြပ် ကိုယူပြီး နားကြပ်က၀က်အူရစ်ကို ဖြေးဖြေးခြင်း လှည့်ဖွင့်နေပါတယ်။ပြီးတော့ အိတ်ထဲက ဇာဂနာ တစ်ချောင်းထုတ်ပြီ့း နားကြပ်ရဲ့ပိုက်တစ်လျောက်မှာ
ထိုးတည့်ထားတဲ့ ဂွမ်းစတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ကျောင်းသားအားလုံးဟာ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ် ။
ဘာမှ မကြားနိုင်တဲ့နားကြပ်နဲ့နားထောင်ပြီး ကြားခဲ့တယ်လို့သူတို့ ပြောခဲ့မိပြီ ။ ပြောတာမှ ပီပီသသကြီးကြားခဲ့ရတယ် တဲ့၊ ။စာအုပ်ထဲကအတိုင်းပဲတဲ့ ၊၊
"မင်းတို့… နောက်ကို ဒီလိုဘယ်တော့မှ မဖြစ်ကြစေနဲ့ ၊
ဘာမှမကြားရရင် မကြားဘူးပဲပြောပါ ။
ဟန်မဆောင်နဲ့ ။ မညာနဲ့ ၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်း မညာမိစေနဲ့ "၊
ဒါကတော့ အဲဒီ ဆေးကျောင်းသား တစ်စုရဲ့ ပထမဆုံးသော လူနာချည်းကပ်နည်း သင်ခန်းစာပါ ။
အဲ့ ဒိ့ နေ့ ကဆရာ စာမသင်ပါဘူး ၊ဆရာသင်ပေးလိုက်တာကတော့
တွေ့ ရင်တွေ့ တဲ့အတိုင်း
မြင်ရင်မြင်တဲ့အတိုင်း ပြောပါ။ .....ဒါ ပထမဆုံးသင်ခန်းစာ" တဲ့။
ဆေးပညာအတွက်သာမက ဘ၀တစ်လျှောက်အတွက်ပါ ဒီစကား အရေးကြီးလှပါတယ်။
" မိမိကိုယ် မိမိ တို့ ရိုသေဖို့ လိုတယ် " ဆိုတာသင်ပေးလိုက်တာပါ ။
၀န်ခံချက်။ ။စာရေးဆရာ..ကမောင်သစ်ဆင်းပါ...။မနက်ဖြန်ဆိုတဲ့ ...ဆောင်ပါးထဲ က.
.ကြိုက်နှစ်သက်လွန်းလို့ ဘလော့ အနေနဲ့ ရေးပေးလိုက်တယ်။
ပညာရှိတယောက်၊စာရေးဆရာတယောက်က ရိုးသားစွာနဲ့ စေတနာရှိစွာ ရေးသားထားသည့် စာပုဒ်ဟာစာအုပ်တအုပ်ပဲ။စာအုပ်တွေထဲမှာမကောင်းတာတွေ၊အပေါ်ယ့ကျတာတွေ၊ကရော်
စာအုပ်အမျိုးအစားအားလုံးကိုခွဲကြည့်လိုက်ရင်နှစ်မျိုးပဲ၇ှိတယ်။တမျိုးကခုလောလောဆယ်ဖ တ်ရမယ့်စာအုပ်၊ခုနာ၇ီအပိုင်းသာခံတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်။နောက်တမျိုးကတော့ေ၇ရှည်ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်၊ခေတ်တိုင်းခေတ်တိုင်းခံတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နာရီပိုင်းသာခံတဲ့စာ၊ခုချက်ချင်းဖတ်ရမယ့်စာပေဆိုတာကတော့ဗဟုသုတကိုပေးတဲ့စာတွေဖြစ်ပါတယ်။သတင်းစာတို့၊ဂျာနယ်တို့ဟာတနေ့လု့းဖတ်ရမယ်စာတွေမဟုတ်ပါဘူး။မနက်ပိုင်းဖတ်လိုက်ရင်ကုန်သွားတာပဲ။ခေတ်တိုင်းခံတဲ့စာဆိုတာကေ တာ့ခံစားချက်၊အတွေးအခေါ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်အမျိုးအစားနှစ်ခုကိုရပ်စကင်းကနောက်တနည်းပြောပါသေးတယ်။အသံကိုပွားစေတဲ့စာအုပ်နဲ့အသံကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့စာအုပ်လို့ပြောပါသေးတယ်။အသံကိုပွားစေတဲ့စာအုပ်ဆိုတာလူပေါင်းများစွာကိုတခါတည်းမပြောနိုင်တဲ့အတွက်၊တနေရာတည်းမှာပြောလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကူးယူပုံနှိပ်ပြီးပြောရတာ။တိုင်းမဂ္ဂဇ င်းတို့၊ဘာတို့ဆိုတဲ့သတင်းမဂ္ဂဇင်းတွေဟာတချိန်တည်း၊တနေရာတည်းမှာပြောလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲဒီအထဲမှာပါတဲ့သတင်းတွေကိုပွားပြီး၊ကူးယူပြီးဖြန့်ဝေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အသံကိုပွားစေတဲ့စာအုပ်လို့ရပ်စကင်းကခေါ်ပါတယ်။အသံကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့စာအုပ်ကတော့အတွေးအခေါ်များ၊အဆိုအအမိန့်များ၊ခံစားချက်များကိုနောင်မှာပျောက်ကွယ်မသွား၇အောင်နောင်လာနောက်သားတွေမှတ်နိုင်ဖတ်နိုင်အောင်ထိမ်းသိမ်းထားတဲ့စာအုပ်တွေပါ။
ဒီတော့စာအုပ်ကောင်းတအုပ်ကို ကောက်ကိုင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ကြည့်ရလိမ့်မယ်။ ငါဟာရွှေတူးသမားတယောက်လိုလုပ်နိုင်ပါ့မလား။ကိုယ့်ပေါက်တူးတွေ၊ဂေါ်ပြားတွေ၊လက်နက်ကိရိယာတွေကောင်း၇ဲ့လား။ကျမ္မာရေးကောင်း၇ဲ့လား။စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်ရဲ့လား။အဲဒီမေးခွန်းတွေ မေးဘို့လိုတယ်။ဒီမေးခွန်းတွေဟာအရေးကြီးပါတယ်။ခင်ဗျားခွဲခြေထုထောင်းပြီးအရည်ကျို၇မယ့်ကျောက်ခဲ့တုံးတွေဟာစာရေးဆရာ၇ဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားသုံး၇မယ့်ပေါက်တူးတွေ၊ဂေါ်ပြားတွေဟာခင်ဗျား၇ဲ့အလေးထားမှု၊စိတ်အားထက်သန်မှု၊ပညာအခံတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ မီးဖိုဟာခင်ဗျားရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဥာဏ်၊ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေ၇ှိမယ်လို့ထင်ရတဲ့စာအုပ်ကိုခင်ဗျားဖတ်ပြီ။ခင်ဗျားပညာအခံတွေနဲ့ခင်ဗျားမျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့ပေါက်တူးတွေ၊ ဂေါ်ပြားတွေနဲ့တူးပြီ။ အဲဒါတွေကိုခင်ဗျားကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်၊ကိုာ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ဆိုတဲ့မီးဖိုပေးမှာကျို လိုက်ပြီ။အဲဒီအခါတချို့သောကျောက်ခဲတွေဟာအဖြုန်းတွေဖြစ်ပြီး၊အချို့သောကျောက်ခဲတွေ
မှာရွှေစတွေပါလာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရွှေလေးတစကိုလိုချင်၇င်ကိုယ်မှာလက်နက်ကိရိယာ၇ှိရလိမ့်မယ်။စာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်မှာလက်နက်ကိရိယာရှိရလိမ့်မယ်။စိတ်၇ှည်မှုနဲ့၊စိတ်အားထက်သန်မှုတို့၊ကိုယ်ပညာအခံတို့ဆိုပါတော့။စကားလုံးတွေကိုထုထောင်ခွဲချေပြီး ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်၊ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့မီးပြင်းတိုက်ကျိုရလိမ့်မယ်။စာအုပ်တအုပ်ကိုဆယ်မျက်နှာလောက်ဖတ်ပြီးအဲဒီဆယ်မျက်နှာလေက်ထဲကစာလုံးတွေတလုံးချင်း၇ဲ့အဓိပါယ်ကိုတိတိကျကျ၊သေသေချာချာနားလည်ပြီဆိုရင်တစု့တခုသောအတိုင်းအတာအထိစာပေကျွမ်းကျင်သူတဦးလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။စာတတ်ခြင်းမတတ်ခြင်းဟာအဲဒီစကားလုံးတွေကိုတိကျစွာနားလည်ခြင်း၊မလည်ခြင်းပေးမှာတည်တယ်။ပညာသင်ကြားခြင်း၇ဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာရာထူး၇ဘို့မဟုတ်၊အမှားနဲ့အမှန်ကို ဆုံးဖြတ်တတ်ဘို့၊တရားမှုနဲ့မတရားမှုကိုခွဲခြားတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by SLIP in အတွေးမှတ်စုများ ....
စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပါ လူတိုင်းကို ထိန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းနိုင်သူသာလျှင် စွမ်းအားအရှိဆုံး။
စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်သူတို့ကား ဘယ်တော့မှ မပေါက်ကွဲကြ။
ဘယ်တော့မှ အော်ကြီးဟစ်ကြယ် မလုပ်ကြ။ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံကြုံ ဣနြေ္ဒမပျက်ပဲ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင် ကြတယ်။
အက်ဒီဆင်ဟာ သူ့စက်ရုံတွေ မီးထဲ ပါသွားသောအခါ မတုန်မလှုပ် တည်ငြိမ်စွာဖြင့် လက်ပိုက် ကြည့်နေနိုင်ခဲ့တယ်။
ပညာရှင်ကြီး အီမာလည်း သူ့ရဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ စာကြည့်တိုက်ကြီး မီးလောင်သည်ကို အပြုံးမပျက် ကြည့်နေ နိုင်ခဲ့တယ်။
လူတစ်ယောက်သည် ဘယ်လောက်တော်တော်၊ ကိုယ်စိတ်(၂)ပါး တည်ငြိမ်မှုမရှိလျှင် ဘယ်တော့မှ ခေါင်းဆောင်ကောင်းမဖြစ်နိုင်။
ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး တည်ငြိမ်မှုကို ရလိုလျှင် ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် ပြုပြင်ပါ။ အားပေးပါ၊ အိပ်ယာဝင်အိပ်ယာထတိုင်း " ငါ့မှာ တန်ခိုးပါဝါရှိတယ်၊ ငါ့ကိုငါထိန်းနိုင်တယ်၊ ငါလုပ်ရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်၊ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဖြစ်တယ်..." လို့ ဘုရားဝတ်ပြုသလို နေ့တိုင်း မပျက်မကွက် အာရုံပြုပါ။ ရွတ်ဆိုပါ။ ကြွေးကြော်ပါ။
ဘယ်ကိစ္စကြောင့်နဲ့မှ ကိုယ့်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ မပျောက်ပျက် မဆုံးရှုံးစေနဲ့။
" စာဖတ်ခြင်း " ဟာ ပြည့်ဝတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်စေတယ်။
" ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်း " က အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေတယ်။
" စာရေးခြင်းက " က တိကျတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေတယ်။
စစ်မှန်တဲ့ စကားပြောကောင်းခြင်းဆိုတာ လိုအပ်တာထက် တစ်ခွန်းတစ်ပါဒမှ ပိုမပြောတဲ့ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာအားလုံးကို ပြောဆိုခြင်းပဲ။
ရန်သူတစ်ထောင် မသိစေချင်တဲ့ စကားကို ဘယ်တော့မှ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီ ထုတ်မပြောနဲ့။
မိန်းမသားတွေအနေနဲ့ သူတို့တစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာ အချိန်ကို ဘယ်လိုကုန်စေတယ်ဆိုတာသာ ယောက်ျားတွေသိကုန်ရင် သူတို့ကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်ထပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။
အဆင်ပြေ ကောင်းမွန်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ မျက်စိမမြင်တဲ့ ဇနီးနဲ့ နားလေးတဲ့ ခင်ပွန်းသည်တို့ ပေါင်းဖက်မှပဲ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဇနီးမယားတွေဟာ သူတို့ကို အသနားခံချင်ကြတယ်။ ချီးမွမ်းခံချင်ကြတယ်၊ သဘောကျနှစ်ချိုက်တာ ခံချင်ကြတယ်ဆိုတာကို မမေ့နှင့်။
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် နိဗ္ပာန်နှင့် ငရဲကြားရှိ ဒုက္ခဘုံသို့ ရောက်သွားခြင်းသာဖြစ်သည်။
အချစ်ကို ရှောင်ရမယ်။ ချစ်ပြီးရင် လက်ထပ်မှာပဲ၊ တကယ်တော့ လက်ထပ်တာဟာ အင်မတန် အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ပဲ။
မိတ်ဆွေကို အကောင်းဆုံး ထိန်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ မိတ်ဆွေတွေဆီက ဘယ်တော့မှ အချေးအငှားမလုပ်ဖို့၊ ဘယ်တော့မှ အချေးအယူ မလုပ်ဖို့ဘဲ။
လူသားမျိုးနွယ်က ' စစ် ' ကို အဆုံးသတ်ရင်သတ်။ ဒါမှမဟုတ်ပါက ' စစ် ' က လူသားမျိုးနွယ်ကို အဆုံးသတ်ပစ်လိုက်မှာပဲ။
Mankind must put an end war or war will but an end to mankind.
သင့်ပါရမီစွမ်းရည် ဘယ်လောက်ရှိတာက အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ပါရမီကို ဘယ်လို သင်အသုံးချမလဲဆိုတာပဲ အရေးကြီးတယ်။
It is not the size of your talent; It is what you do with it.
မင်းလုပ်နိုင်သလောက်ပဲလုပ်ပါ။ မင်းလုပ်သလောက်နဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။
မင်းအခု စလုပ်လိုက်ပါ၊ မင်းဘယ်တော့မှ နောက်မကျပါဘူး။ အခုမလုပ်ရင်တော့ နောက်ကျသွားပြီ။
If you start now you will never late. But if you don't start now, you will be late.
ရင်းနီးမှုမှ အားမနာမှုတို့၊ အထင်သေးမှုတို့ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ကလေးငယ်များကို စကားပြောတတ်အောင် သင်ပေးလို့ရသလိုပဲ။ သတ္တိရှိအောင်လည်း သင်ပေးလို့ ရပါတယ်။
Courage may be tough, asachild is thought to speak.
ကြောက်စရာကောင်းတာ သေခြင်း မဟုတ်ပါဘူး၊ သေလုမျှောပါးဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ပါ။
It is not death, but dying which is terrible.
သေလိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို မပြုလုပ်မိခင်မှာ သေသွားတာကောင်းတယ်။
It is good to die before one has done, anything deserving death.
ကြိုက်သလောက်ဆူပါ၊ ဆဲပါ ကျွန်ုပ် မနာပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက် အကျိုးများပါ၏။
A bused me as often as you will it is oftenabeanie than any injury.
လောကကြီးကို အတွေးအခေါ်များက စိုးမိုးထားသည်။
မနက်ဖြန်မှ၊ မနက်ဖြန်မှ၊ ဆိုတာ ဒီနေ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါလူပျင်းတွေသာ ပြောတတ်တဲ့ စကားပါ။
Tomorrow, tomorrow, not today. Hear the lazy people say.
ဘယ်သူဟာပညာရှိလဲ?့ တစ်ယောက်ယောက်ဆီမှာ အမြဲလေ့လာဆည်းပူးနေတဲ့သူဟာ ပညာရှိပါပဲ။
ဘယ်သူဟာ အစွမ်းထက်သလဲ? တည့်မက်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သူဟာ အစွမ်းထက်သူပါပဲ။
Who is powerful? He that governs his passion.
Silence is worthathousand places of gold or silver.
အိမ်ဟူသည် သမီးငယ်အတွက် အကျဉ်းထောင်၊ မိခင်အတွက်တော့ အလုပ်ရုံ။
အချစ်ဆိုတာ လူပေါ်ကြော့တွေအတွက် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုဖြစ်သလို၊ စစ်ပွဲဆင်နွဲသူများအတွက် အပန်းဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ( ဒါပေမယ့် ) မင်းစိုးရာဇာများအတွက်တော့ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း တစ်ခုပဲ။
Love is the idler's occupation. The warrior's relaxation, and the sovereign's ruination.
အချစ်မီးတောက်မီးလျှံများ ငြိမ်းသွားပြီးနောက်တွင် မီးကြွင်းမီးစများသာကျန်ခဲ့မည်။ ရွှေ မကျန်ခဲ့ပါ။
When the fire of love is extinguished one finds cinders but not gold.
အချစ် = ပြင်းထန်သော စိတ်ရောဂါတစ်ခု။
Love. A grave mental disease.
ရှာဖွေရယူသောအချစ်သည်ကောင်း၏၊ သို့သော် တွေ့ရှိသောအချစ်က ပိုကောင်း၏။
Love sought out is good, but love discovered is better.
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က မင်းကိုငါချစ်တယ်။ ကြာသပတေးနေ့ကျ မင်းကိုမချစ်တော့ဘူး။ အဲဒါအမှန်ပဲ။
And if I loved you wednesday. I do not love you Thursday. So much is truth.
သစ်ဆုံသည် ရဲတင်းကို ပျက်စေ၏။ ဆာလောင်မှုသည် အချစ်ကို ပျက်စေ၏။
The tree knit spoils the ace, hunger spoils love.
ဘီလျံနာသူဌေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ရုပ်သံအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ၊ မင်းသမီး၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပရဟိတာဒါနရှင်အဖြစ် လျှမ်းလျှမ်း တောက်ကျော်ကြားသော အော်ပရာဝင်းဖရေး၏ ပထမဆုံးအလုပ်မှာ နစ်ရ်ှဗယ်လီမြို့ရှိ သူ့ဖခင်၏ ဆံသဆိုင်နံဘေးမှာ ကပ်ကာဖွင့်ခဲ့ရသည့် ကုန်စုံဆိုင်ငယ်ကလေးဖြစ်သည်။
ဘီးလ်ဘဏ်နှင့် ဘီးလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာကုမ္ပဏီကိုထူထောင်သူနှင့် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ၏ ပထမဆုံးအလုပ်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားစက် ရောင်းသူဖြစ်သည်။
ယခုအခါ Facebook၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဘီလျံ ချမ်းသာသည်။ သို့သော်သူသည် မထင်မရှားဘ၀ဖြင့် Facebookကုမ္ပဏီကို စတင်ထူထောင်ခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
Appleကုမ္ပဏီကို ပူးတွဲထူထောင်သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ၏ ပထမဆုံးအလုပ်မှာ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ပစ္စည်းရောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိုသူများ အတွက် ကမ္ဘာကျော် အဆိုအမိန့်အချို့
လူတိုင်း အတိုက်အခိုက်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ကြသော်လည်း အာဏာဒဏ်ကို မခံနိုင်။ လူတစ်ယောက်၏ သီလကို စမ်းသပ်လိုလျှင် အာဏာပေးလိုက်ပါ။
လူတစ်ယောက်ကို လေ့ကျင့်ပေးရန်ထက် ဖြုတ်ပစ်ရန်က ပိုလွယ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများသည် လူများကို အလုပ်ဖြုတ်ရာ၌ နာမည်ကျော်သူများ မဟုတ်ကြ။ လူများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ရာ၌သာ နာမည်ကျော်သူများ ဖြစ်သည်။
လူအတော်များများက အခြားသူများ မည်သို့ ပြောင်းလဲသင့်သည်ကို သိကြသော်လည်း လူအနည်းငယ်ကသာ သူတို့ မည်သို့ ပြောင်းလဲသင့်ကြောင်း သိကြပေသည်။
အမြင့်မားဆုံး ခေါင်းဆောင် ဆိုသည်မှာ
(ဖရက်ဒ် အေ မန်းစ်ကေး)
ခေါင်းဆောင်ရွေးရင် ဘာကို ဦးစားပေးမလဲ
ခေါင်းဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ မဟာဗျူဟာနှင့် သီလ ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ခုသာ ရနိုင်မည် ဆိုလျှင် မဟာဗျူဟာ (ရှိသူ) ထက် သီလ (ရှိသူ) ကို ဦးစားပေးပါ။
(အိပ်ခ်ျ နော်မန် ရှဝါ့ဇ်ကော့ပ်)
လူတွေ၏ ထိပ်ကို လက်သီးနှင့် ထိုးပြီး ခေါင်းဆောင်၍ မရ။
(ဒွိုက် ဒီ အိုက်ဆင်ဟောင်ဝါ)
ခြင်္သေ့တစ်ကောင် ဦးဆောင်သော သိုးတပ်က သိုးတစ်ကောင် ဦးဆောင်သည့် ခြင်္သေ့တပ်ကို အောင်နိုင်၏။
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံ(ကျမ်းပြုဆရာ ယုဒသန်)
နောက်တစ်နေ့တွင် ယုဒသန်သည် အခြားအဖော်လေးဦးတို့နှင့်အတူ အရှေ့အာရှနိုင်ငံများသို့ သွားပြီး သာသနာပြုရန်စေလွှက်ခြင်းခံရသည်။ ယုဒသန်တို့ဇနီးမောင်နှံသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဆေလမ်မြို့ ဆိပ်ကမ်းမှ သင်္ဘောဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ ဇွန်လတွင် ကာလကတ္တားမြို့သို့ ဆိုက်ရောက်သည်။ ထိုအချိန်က ဗြိတိသျှ အစိုးရနှင့် အမေရိကန် အစိုးရတို့အချင်းချင်း မသင့်မတင့်ဖြစ်နေသည်။
ဗြိတိသျှတို့၏ အရှေ့ အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ သည်အမေရိကန် သာသနာပြုများကို ထိုတိုင်းပြည်တွင် နေထိုင်ရန် မလိုလားချေ။ ထိုကြောင့် အိန်ဒိယနိုင်ငံရှိ ဘုရင်ခံချုပ်က ယုဒသန်နှင့်သူ၏ဇနီးကို အမေရိကန်သို့ပြန်ရန်အမိန့်ပေးလေသည်။ ယုဒသန်သည် အရှေ့အာရှနိုင်ငံများတွင်သာသနာပြုရန်ကို စွန့် လွှက်ရမည်ကဲ့သို့ အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေခဲ့သော်လည်း ၁၈၁၃ခှုစ် ဇွန်လဆန်းတွင် အရှေ့ဖက်ကို ကြုံရာသင်္ဘောနှင့်သွားမည်ဟူသောအကြံဖြင့် အ်ိန္ဒိယနိုင်ငံ မဒရပ်မြို့သိူ့ တဖန်ထွက်ခွာခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း လစာအမြင့်ဆုံးရသော အောင်လက်မှတ် ၁၅ မျိူး
အနိမ့်ဆုံးလစာ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းမှာစ၍ရရှိသော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလစာ ဒေါ်လာ ၁၀၁၁၀၃ ရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလစာ ဒေါ်လာ ၉၅၄၁၅ ဒေါ်လာရရှိုနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလစာ ဒေါ်လာ ၉၄၀၁၈ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
CCIE ( Certified Cisco Routing and Switching)
အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၈၈၂၄ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
CCVP (Certified Cisco Voice Professional)
ITIL Master (IT Infrastructure Library Master)
အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၆၆၀၀ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်ရရှိနိုင်သောမျိူးဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၄၅၂၂ ဒေါ်လာရရှိုနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၄၁၆၁ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၃၆၉၂ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၂၉၄၁ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလစာ ၈၀၀၀၀ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလစာ ၇၉၄၄၄ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလစာ ၇၇၀၀၀ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလစာ ၇၆၉၆၀ ဒေါ်လာရရှိနိုင်သော အောင်လက်မှတ်မျိူးဖြစ်သည်။
CNet အယ်ဒီတာအဖွဲ့၏ ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
လစာမှာ တစ်နှစ်ပျမ်းမျှ လစာဖြစ်သည်။
သတ္တမနှစ်ပတ်လည် (သိုးမွှေး (သို့) ကြေးနီရတု)
၁၁ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (သံမဏိရတု)
၁၂ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (ပိုးသားရတု)
၁၃ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (ဇာရတု)
၁၄ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (ဆင်စွယ်ရတု)
၁၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (သလင်းရတု)
၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (ကြွေထည်ရတု)
၂၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (ငွေရတု)
၃၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (ပုလဲရတု)
၃၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (သန္တာ (သို့) ကျောက်စိမ်းရတု)
၄၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (ပတ္တမြားရတု)
၄၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (နီလာရတု)
၅၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (ရွှေရတု)
၅၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (မြရတု)
၇၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (စိန်ရတု)
၁၀၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် (ရာပြည့်)
Beautiful Autumn Leaves Photos
If you need any help, you can contact meepyatite@gmail.com & forall85ster@gmail.com & simpleviews2010@gmail.com.
ဤ Email (သို့မဟုတ်) ဤ Post သည် Myanmar Daily Mail Group မှ ဖြစ်သည်။ Myanmar Daily Mail ၏ Group စာမျက်နှာမှာ http://groups.google.com/group/mayanmardailymail ဖြစ်ပြီး Blog စာမျက်နှာမှာ http://myanmardailymail.blogspot.com/ ဖြစ်သည်။ ယင်းစာမျက်နှာများသည် အများပိုင် စာမျက်နှာများဖြစ်ပြီး mayanmardailymail@googlegroups.com သို့ လိပ်မူ၍ Email ပို့လိုက်သည်နှင့် Group စာမျက်နှာနှင့် Blog စာမျက်နှာ နှစ်ခုလုံးတွင် တပြိုင်နက်တည်း Post တင်ပြီးသားဖြစ်အောင် စီမံထားသည်။
ထို့ကြောင့် Post တင်ရာတွင် (သို့မဟုတ်) Email ပို့ရတွင် မလိုအပ်သည့် စာသားများ၊ မလိုအပ်သည့် Email များနှင့် တစ်ဦးချင်းဖြင့်သာ သက်ဆိုင်သည့် ဆွေးနွေးချင်းများကို ရှောင်ရှားဖယ်ထုတ်ပြီးမှ ပို့စေလိုပါသည်။
Myanmar Daily Mail Group တွင် Member ဝင်လိုပါက mayanmardailymail+subscribe@googlegroups.com သို့ Email ပို့ကာ အသင်းဝင်နိုင်ပြီး Member အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်လိုပါက mayanmardailymail+unsubscribe@googlegroups.com သို့ Email ပို့၍နှုတ်ထွက်နိုင်သည်။
အွန်လိုင်းမှ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မည့် Ytalk ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသွားမည်ဖြစ် ၊
ဟက်ကာတို့၏အဓိကပစ်မှတ်တွင် ဟောလိဝုဒ် အနုပညာရှင်များ ပါဝင်လာ ၊
မျိုးဆက်သစ် iPhone ကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် မိတ်ဆက်ဖွယ်ရှိ ၊
iPhone5အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိမည် ၊
Sony မှ အနီရောင်နှင့် အပြာရောင် PS3Slim ဈေးကွက်ဖြန့်ချိ ၊
အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ရာထူးကြီးကြီး မပေးလို၍ Microsoft က နှုတ်ပိတ်ခပေးခဲ့ ၊
ဂူဂဲလ်ပိုက်ဆံအိတ်ခေါ် ဖုန်းကို ငွေလွှဲပြောင်းပေးချေခြင်းများ၌ သုံးနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုစတင် ၊
Google+ ကို လူတိုင်း​​သုံး​​စွဲနိုင်ပြီဖြစ် ၊
Google+ တွင် Apps အသစ် ဒါဇင်ကျော် ထပ်မံထည့်သွင်း ၊
Google + အား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်တော့မည် ၊
Youtube တွင် 2D မှ 3D ပြောင်းလဲနိုင်ပြီ ၊
တိုလီမိုလီ IT ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် နည်းပညာ (၈) ၊
နည်းပညာလောက အရေးပါခဲ့သော မမများ ၊
ဘာလဲတဲ့ Blog Blogger Blogging
အွန်လိုင်းမှ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မည့် Ytalk ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသို့ အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရတနာပုံတယ်လီပို့ ကုမ္ပဏီမှ မကြာမီကာလ၌ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အွန်လိုင်းအသုံးပြု၍ တရားမဝင် တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုနေခြင်းများကို ပပျောက်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီး ရတနာပုံ ဝက်ဘ်ပေါ်တယ်၏ အွန်လိုင်းတယ်လီဖုန်း ခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ VolP နည်းစနစ်ဖြင့် အွန်လိုင်းတယ်လီဖနုးခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါနည်းစနစ်ကို အသုံးပြုလိုပါက ရတနာပုံ ဝက်ဘ်ပေါ်တယ်၌ Ytalk Calling အကောင့်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းတယ်လီဖုန်းစနစ်ကို အသုံးပြုရန်အတွက် အသုံးပြုသူအကောင့်၌ ကြိုတင်ငွေဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် FEC ငွေကြေးများကို လိုအပ်သလို ဝယ်ယူဖြည့်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်။
http://voip.yatanarpon.com.mm ၌ အကောင့်သစ်များ ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီး ကြိုတင်ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် Prepaid ကတ်များကို ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အသုံးပြုလိုသူများသည် http://ytalk.yatanarpon.com.mm ၌ မိမိ၏ အကောင့်ဖြင့် ဝင်ရောက် အသုံးပြု ရမည်ဖြစ်ပြီး ကြိုတင်ဖြည့်သွင်းထားသော ငွေလက်ကျန်များနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ဆုံးရက်များလည်း လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားအဆင့် ရတနာပုံဝက်ဘ်ပေါ်တယ်သည် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အွန်လိုင်းမှတရားဝင်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မည့် Ytalk Calling ကို စတင် အသုံးပြုခွင့် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟက်ကာတို့၏အဓိကပစ်မှတ်တွင် ဟောလိဝုဒ် အနုပညာရှင်များ ပါဝင်လာ
Hackers attack Celebrities
ဟက်ကာတို့၏ အဓိက ပစ်မှတ်တွင် ဟောလိဝုဒ်မှ အနုပညာရှင်များ ပါဝင်လာကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ ဟောလိဝုဒ် အနုပညာရှင်များ၏ ကိုယ်ပိုင် သတင်းအချက်အလက်များ ခိုးယူသူ ဟက်ကာအဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ရှိနေပြီး၊ ယင်းအဖွဲ့အား စုံစမ်းထောက်လှမ်းလျက်ရှိကြောင်း အမေရိကန် စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး ဌာန FBI မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
FBI မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ ဟောလိဝုဒ် အနုပညာရှင်ပေါင်း ဒါဇင်ကျော်၏သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ အခိုးခံရပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင် စကားလပ်ဂျိုဟန်ဆန် ၏ ဂျီမေး တွင် သည်းဆည်းထားသော ဓာတ်ပုံများကို ဟက်ကာ များမှ ခိုးယူခဲ့ပြီး၊ ၄င်းတို့မှ လွင့်တင်ထားသော ဝဘ်ဆိုဒ်တစ် ခုတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းအတွက် စကားလပ်ဂျိုဟန်ဆန် သည် FBI အား တိုင်ကြားခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်စေခဲ့ သည်။ ထို့အပြင် ယခင်လက နယူးယောက်မြို့ ကျင်းပခဲ့သည့် ရုပ်သံတေးဂီတ ထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှ သတင်းဓာတ်ပုံ နှင့် ဖျော်ဖြေရေး ရှိုးများများ လည်း Twitter ပေါ်တွင် ပြန့်ကျဲခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဟောလိဝုဒ် အနုပညာရှင်များ ဖြစ်သော ဒေးဗစ် စပေ့၊ မီလီဆိုင်းရက်၊ အချလီ တစ0x081စဒေးနှင့် အခြားအနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာ၏ ဖုန်းနံပါတ်များလည်း ပေါက်ကြားစေခဲ့သည်။
ဟက်ကာတို့၏ အဓိကပစ်မှတ်မှာ အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်၊ အစိုးရပါတီအဖွဲ့အစည်းနှင့်နိုင်ငံတကာ အာဏာပိုင်များ ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှစတင်၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကမ0x081ဘာ့အိုင်တီကုမ0x081ပဏီကြီးများဖြစ်သည့် Sony , Apple, Nokia, Samsung , Mrosoft စသည့် ကုမ0x081ပဏီများ၏ ကွန်ရက်ကိုလည်း ဖျက်ဆီးပြီး၊ သတင်းအချက် အလက်များ၊ အွန်လိုင်းငွေချေကဒ်များကို ခိုးယူ ခဲ့သည်။ ဟက်ကာတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုသည် အလွန်ပြင်းထန်ပြီး၊ ဝဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများကိုပင် ယာယီပိတ်နိုင်ပြီး၊ ကိုယ်ပိုင် အကောင့်များ ကို ဖျက်ဆီး ခိုးယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ဟက်ကာတို့၏ ဟောလိဝုဒ် အနုပညာရှင်များအား အကြီးမားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအနေဖြင့် ၂၀၁၂ခုနှစ် တွင် ရုံတင်ပြသရန် ရိုက်ကူးထားသော တွန်ခရုစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည့် Rock of Ages ရုပ်ရှင်ကို ခိုးယူပြီး ဝဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာတွင် တင်ခဲ့သည်။ ယင်းအတွက် စုံစမ်းစစ်းလျက်ရှိပြီး၊ အခြား ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် များလည်း အခိုးယူခံရနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
မျိုးဆက်သစ် iPhone ကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် မိတ်ဆက်ဖွယ်ရှိ
Appleကုမ္ပဏီသည် ပဉ္စမမြောက် iPhoneမျိုးဆက်ကို အောက်တိုဘာ (၄)ရက်နေ့တွင် စတင်ပွဲထုတ်ဖွယ် ရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။ Apple၏ အမှုဆောင်ချုပ် အသစ်ဖြစ်သူ တင်မ်ကွတ်ခ်သည် ယင်းမိတ်ဆက်ပွဲကို ဦးဆောင်လိမ့်မည်ဟုလည်း All Things Digitalက ဖော်ပြခဲ့သည်။ Apple၏ အမည်ဖော်မပြသော အတွင်းလူ တစ်ဦး၏ အဆိုကို ကိုးကားပြီး ယခုလို သတင်းထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Appleသည် iPhoneအသစ်ကို သီတင်းပတ် အနည်းငယ် အကြာတွင် မိတ်ဆက်ပြသမည်ဟု အရိပ်အမြွက် ပြောဆိုထားသည်။ iPhone 5ဟု လက်တလော အမည်သတ်မှတ်ထားသည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည် ဈေးကွက်အတွင်း အပြင်းအထန် ပြိုင်ဆိုင်လာသည့် Android OSသုံး ဖုန်းများကို အသာစီး ယူနိုင်မည်ဟု iPhone ပရိသတ်များက မျှော်လင့်နေသည်။ အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများအရ iPhone 5၏ ကိုယ်ထည် တည်ဆောက်ပုံသည် iPhone 4ထက် ပိုမိုပါးလွှာနိုင်ပြီး CPUမြန်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် iPhoneကို Hardwareပိုင်း တာဝန်ယူ ထုတ်လုပ်ပေးနေသည့် Foxconnသည် တစ်နေ့လျင် iPhone 5မော်ဒယ်လ် အလုံးရေ တစ်သိန်းခွဲမျှ ထုတ်လုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
iPhone5အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိမည်
iPhone5will be launched on October 4
Apple ထုတ် iPhone5ဟာ အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိမယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါပြီ။
iPhone5ထွက်ရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကမ0x081ဘာတစ်ဝန်းက Apple စတိုးတွေမှာ ကြိုတင်မှာယူထားမှုနဲ့လည်း ပြည့်နက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ0x081ပဏီရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ စတင်ရောင်းချပြီး တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ကုန်ပစ0x081စည်း ပြတ်လပ်မှုရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပစ0x081စည်းပြတ်လပ်မှု ပြဿနာ ကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် Apple ဟာ Foxconn Manufacturer ကုမ0x081ပဏီနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ။ တစ်ရက်ကို iPhone5အလုံးရေ တစ်သိန်းခွဲ ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ ကတိပြုထားတဲ့ Foxconn နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။
ယခင်ကလဲ Foxconn ကသာ Apple ထုတ် ကုန်ပစ0x081စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် iPhone5ကာဗာ အတွက်လဲ Case Mate ကုမ0x081ပဏီမှ ထုတ်လုပ်နေပါပြီ။ ဒီ iPhone5ကာဗာများဟာ ဒီဇိုင်းအားဖြင့်လှပပြီး ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ရောင်းချနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ Cade Mate မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Sony မှ အနီရောင်နှင့် အပြာရောင် PS3Slim ဈေးကွက်ဖြန့်ချိ
Sony release new designed PS3 slim
ဂျပန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Sony Computer Entertainment ကုမ0x081ပဏီမှ အနီရောင်နှင့် အပြာရောင် PS3slim ကိုနိုင်ငံတကာဈေး ကွက်ကို စတင်ဖြန့်ချိတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Playstation3 slim အား ဩဂုတ်လ မှ စတင်ဖြန့်ချိရာ အဖြူရောင် နှင့် အနက်ရောင်သာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ဒီဇိုင်းသစ် အရောင် နှစ်မျိုးကို စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်ပွဲထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Internal Memory အနေဖြင့် 320G ရှိသော ထို PS3 Slim (CECH-300B) အား နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တွင် စတင်ရောင်ချမည်ဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၉၀ တန်ဖိုးရှိကြောင်း သိရသည်။ စက်တွင်ပါဝင်သော Software နှင့် Hardware အပိုင်းများ မပြောင်းလဲသော်လည်း အရောင်ကို ပိုမု အသားပေးထုတ်လုပ် ခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူကို ပိုမိုဆွဲဆောင် နိုင်ကြောင်း Sony ကုမ0x081ပဏီမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဈေးနှုန်းအားဖြင့် မြင့်မားသော Play Station3slim မှာ အမေရိက နှင့် ဥရောပ ဈေးကွက်တွင် အရောင်းသွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ ဂိမ်းလောက တွင် Xbox360, Wii, PS3 အမျိုးအစားဂိမ်းများ သည် လူကြိုက်များလျက်ရှိပြီး PS3 မှာ ဆော့ကစားသူ အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Sony Computer များရောင်းအား မကျဆင်းစေရန် ဒီဇိုင်းသစ် အမျိုးမျိုးနှင့် ဂိမ်းခွေ သစ်များ ထုတ်လုပ်ကာ သုံးစွဲသူ လျော့မသွားရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ရာထူးကြီးကြီး မပေးလို၍ Microsoft က နှုတ်ပိတ်ခပေးခဲ့
ဗြိတိန်ရုံးခွဲ စီမံရေးရာ ဒါရိက်တာ ရာထူးအတွက် ထိုက်တန်သော်လည်း နာတာလီ အေယက်စ်သည် ငြင်းပယ်မှုနှင့်သာ ကြုံခဲ့ရ
Microsoftကော်ပိုရေးရှင်းသည် ၎င်းတို့၏ မျက်စိလျှမ်းမှုကြောင့် ထိုက်တန်သည့် ရာထူးနေရာတစ်ခုကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီး အမှုဆောင် တစ်ဦးအား နှုတ်ပိတ်နေရန် ပေါင်စတာလင် (၁)သန်းကျော် ပေးခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။ ဗြိတိန်ရုံးခွဲ စီမံရေးရာ ဒါရိက်တာ ရာထူးအတွက် ထိုက်တန်သော်လည်း နာတာလီ အေယက်စ်သည် ငြင်းပယ်မှုနှင့်သာ ကြုံခဲ့ရသည်။ (၂၀၀၆)ခုနှစ်၊ နွေရာသီက Microsoft၏ တောင်အာဖရိကဆိုင်ရာ အထွေထွေ မန်နေဂျာဖြစ်သူ ဂေါ်ဒွန် ဖရေဇာကို အင်တာဗျူးပြီး ဖြစ်သောကြောင့် နာတာလီအား ငြင်းပယ်ခဲ့ရာ သူမအတွက် နစ်နာစရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထူးချွန်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် အများက သတ်မှတ်ချီးကျူးခဲ့သည့် နာတာလီသည် Microsoftတွင် (၁၅)နှစ်ကြာ မြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူမ၏ မကျေနပ်စရာ ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ နှုတ်ပိတ်ပေးနေရန် သဘောတူ ကျေနပ်ပြီးနောက် Microsoftက နစ်နာကြေးတစ်ရပ် ပေးချေခဲ့ကြောင်း ကော်ပိုရေးရှင်း၏ အတွင်းလူအချို့က Daily Telegraphသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ "Microsoftမှာ အမျိုးသားတွေပဲ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသလို ဖြစ်နေတယ်။ စီမံရေးရာပိုင်းမှာ ယောက်ျားတွေကို ပိုပြီးနေရာပေးတာ အသားသေသလို ဖြစ်နေပါပြီ"ဟု တစ်ဦးကဆိုသည်။
နာတာလီသည် Microsoft၏ သေးငယ်သော လုပ်ငန်းခွဲများကို ဗြိတိန်တွင် တာဝန်ယူထားရသူဖြစ်သည်။ "အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် သံသယရှိနေတဲ့ လူတွေလို့ အထင်ခံရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ Microsoftမှာ အဆင့်တိုင်းအတွက် သဘာဝကျကျ ကိုက်ညီတဲ့ မျှော်မှန်းမှုတစ်ခု ရှိနေပါတယ်"ဟု သူမကဆိုသည်။ Microsoftတွင် လိင်ခွဲခြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာဆန်ဆန် သတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းသည် ယခုတစ်ကြိမ် ပထမဆုံး မဟုတ်ပေ။ ဘီလ်ဂိတ်စ် ဦးဆောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းကြီးသည် အိမ်ထောင်ရှင် အထက်တန်း မန်နေဂျာများက အမျိုးသမီး ၀န်ထမ်းများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု ပြုလုပ်ကြောင်း စွပ်စွဲမှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သေးသည်။
ဂူဂဲလ်ပိုက်ဆံအိတ်ခေါ် ဖုန်းကို ငွေလွှဲပြောင်းပေးချေခြင်းများ၌ သုံးနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုစတင်
နယူးယော့ခ် ၊ စက်တင်ဘာ ၁၉
စမတ်ဖုန်းကို ပိုက်ဆံအိတ်ကဲ့သို့ ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းကိစ္စများ၌ အသုံးပြုနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုကို နာမည်ကျော် အွန်လိုင်းနှင့် အထွေထွေ ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီကြီး Google မှ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောခ့်နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့များတွင် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အနီးနားစက်ကွင်း ဆက်သွယ်ရေး (Near Field Communication) စနစ် ခေါ် NFC စနစ်ကို အသုံးပြု၍ သုံးစွဲနိုင်သော ဤ၀န်ဆောင်မှုတွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ မြို့အချို့ရှိ ဆူပါမားကတ်များနှင့် ဈေးဆိုင်ငယ်များ အချို့က ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့က စတင်ပါဝင်လိုက်ကြကြောင်း အမေရိကန် ရူပဗေဒအသင်း၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်အရ သိရှိရသည်။
ဂူဂဲလ်ပိုက်ဆံအိတ် (Google Wallet) ဟု အမည်ပေးထားသော NFC ချစ်ပ်ပြား ထည့်သွင်းထားသည့် Google Nexus S 4G စမတ်ဖုန်းများကို NFC စနစ်သုံး ငွေချေစက်များအနီး ဖြတ်သန်းလိုက်ရုံဖြင့် ငွေချေပြီးသား၊ ငွေလွှဲပြောင်းပြီးသား ဖြစ်စေသည်ဟု သတင်း၌ ဖော်ပြပါရှိသည်။ အဆိုပါ ငွေချေစက်များ တည်ဆောက်ရေး၌ အကြွေးဝယ်ကတ်နှင့် ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း ဆိုင်ရာ ကတ်များ ထုတ်လုပ်သည့် အင်အားကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည့် CitiMasterCard က ၄င်းတို့၏ PayPass စနစ်ကို ထည့်သွင်း၍ ဂူဂဲလ်နှင့်အတူ ပါဝင်အားဖြည့်ပေးခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ဖုန်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော NFC ချစ်ပ်ပြားအတွက် လိုအပ်သော Wallet ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းခြင်း၊ update လုပ်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးသောကြောင့် လက်ရှိတွင် အဆိုပါ ဖုန်းများ ဈေးကွက်တွင် အထူးအ၀ယ်လိုက်လျက် ရှိသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ gdgt.com ၀က်ဘ်ဆိုက်၏ တည်ထောင်သူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သော ရိုင်ယန်ဘလော့ခ်က "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သယ်ရလွယ်တဲ့ ကိရိယာလေးဟာ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအပြင် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့မှာ ငွေပေးချေတာ၊ လွှဲပြောင်းရယူတာတွေကို လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ လုပ်နိုင်တော့မယ့် အနာဂတ်အချိန်တစ်ခုဆီကို နီးကပ်လာပြီဖြစ်လို့ ကျွန်တော် အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်" ဟု CitiMasterCard ကုမ္ပဏီ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀င်ရောက် မှတ်ချက်ပြုရေးသား ခဲ့သည်။
ဂူဂဲလ်နှင့် စပရင့် ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုတို့သည် ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလက်တွဲဖက်များ ဖြစ်သော Citibank, MasterCard တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ အဆိုပါစီမံကိန်းကို ယခုနှစ် မေလကတည်းက စမ်းသပ်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ လတ်တလော၌ အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုကို Google ထုတ် စမတ်ဖုန်းများတွင်သာ အသုံးပြု၍ ရနိုင်ဦးမည် ဖြစ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် Android OS သုံး မိုဘိုင်းဖုန်းများ အားလုံးတွင် အသုံးပြုသွားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဂူဂဲလ်၏ ဒုတိယဥက္ကဌက ပြောပြခဲ့သည်။
အခြား အင်တာနက် သတင်းတစ်ပုဒ် အရ Visa, Discover နှင့် American Express တို့ကဲ့သို့သော နာမည်ကျော် အကြွေးဝယ်ကတ်နှင့် အွန်လိုင်းငွေလွှဲပြောင်းမှု ကုမ္ပဏီများက ၄င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ NFC စနစ်များတွင် အနာဂတ်၏ ပိုက်ဆံအိတ်များ ဖြစ်လာမည့် ဂူဂဲလ်ပိုက်ဆံအိတ်များ ၀င်ရောက်သုံးစွဲနိုင်စေရန် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ကစတင်၍ ခွင့်ပြုပေးလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
"သင်တို့ရဲ့ လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်တွေကို စွန့်ပယ်ပြီး ဂူဂဲလ်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ငွေတွေ ထည့်ပြီး သုံးစွဲနိုင်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့က ရည်ရွယ်ထားပါတယ်" ဟု ဂူဂဲလ်၏ ဒုတိယဥက္ကဌ အိုစမာဘေဒါက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂူဂဲလ်ပိုက်ဆံအိတ် ၀န်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသူများ အတွက် ကယ်လ်ဖိုးနီးယား ပြည်နယ် အခြေစိုက် အွန်လိုင်းဒစ်စကောင့်ကူပွန်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Mountain View မှ လက်ဆောင်များကိုလည်း ခံစားရစေနိုင်ရန် ဂူဂဲလ်မှ စီစဉ်ပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် လတ်တလော ကာလတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း သုံးသိန်းခန့်မှ ၄င်းတို့၏၀န်ဆောင်မှုကို စတင်လက်ခံသုံးစွဲမည်ဟု ဂူဂဲလ်က မျှော်လင့်ခန့်မှန်းထားသည်။
ဂူဂဲလ်၏ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ ဒုတိယဥက္ကဌ ဖြစ်သူ စတက်ဖ်နီ တီလဲန်းနီးယပ်စ်က ဂူဂဲလ်ပိုက်ဆံအိတ်သည် "မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး မျိုးဆက်သစ်" ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။ ဂူဂဲလ်သည် ဤကဲ့သို့ ငွေပေးချေမှုစွမ်းရည်ရှိ စမတ်ဖုန်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အွန်လိုင်းနေထိုင်မှုပုံစံ (Online Lifestyle) ကို ကမ္ဘာအနှံ့သာမက ဒေသန္တရ ရောင်းဝယ်ရေး ဈေးကွက်များတွင်ပါ ပါဝင်တိုးတက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း၊ ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက် လူသုံးပစ္စည်းများကို အွန်လိုင်းမှ ဈေးလျှော့ရောင်းချသော ဂျာမနီအခြေစိုက် ၀က်ဘ်ဆိုက် DailyDeal နှင့် အဆင့်မြင့်စားသောက်ဆိုင်များ အညွှန်းဝက်ဘ်ဆိုက် Zagat တို့ကို ဂူဂဲလ်က မကြာသေးမီက ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး ဖြစ်လေသည်။
ဂူဂဲလ်သည် ယခုကဲ့သို့ သူ၏ စမတ်ဖုန်းများနှင့် Operating System ဖြစ်သော Android တို့ကို အခြေခံသော ဖုန်းကို ပိုက်ဆံအိတ်ကဲ့သို့ သုံးနိုင်သော စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာ့စမတ်ဖုန်းများ၏ ဈေးကွက်ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန် ကြိုးစားနေသည်ဟု ကမ္ဘာ့မိုဘိုင်းဖုန်းနည်းပညာရှင်များ အသိုင်းအ၀ိုင်း၌ ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်လျက် ရှိနေပြီး ထိုသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းနည်းပညာရှင် တစ်ဦးက ဤစနစ်သည် ကမ္ဘာ့ဖုန်းကုမ္ပဏီများ အားလုံးအတွက် ဈေးကွက်ဝေစု ကျဆင်းမှု အတန်ငယ် ရှိနိုင်သော်လည်း အထူးဆိုးရွားမည်တော့ မထင်ကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြီးထွားလာနေသော မိုဘိုင်းဖုန်း ဈေးကွက်သည် ကျန်ကုမ္ပဏီများအတွက် ဈေးကွက်ကောင်းများ အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိသွားမည်ဟု သူ၏အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ဂူဂဲလ်သည် ၄င်း၏ မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ ငွေပေးချေခြင်းစီမံကိန်းအတွက် eBay နှင့် PayPal တို့၏ အွန်လိုင်းငွေကြေး လွှဲပြောင်းရေး အသိပညာစွမ်းရည်မူပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုခြင်းကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရကြောင်း သိရှိရသည်။
Google+ ကို လူတိုင်း​​သုံး​​စွဲနိုင်ပြီဖြစ်
Google+ © dailymail
Googleသည် ၎င်း​တို့​​၏ Social Networking ဝန်​​ဆောင်မှုသစ်ဖြစ်​​သော Google+ကို အသုံး​​ပြုလိုသူ အား​​လုံး​​အတွက် ဖွင့်​​​ပေး​​လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
စမ်း ​​သပ်ဆဲ ကာလတွင် လူဦး​​​ရေ အကန့်​​အသတ်ဖြင့်​​သာ သုံး​​စွဲခွင့်​​ ပြုခဲ့​​​သော Google+သည် ယခုအခါ လူတိုင်း​​အတွက် အလွယ်တကူ သုံး​​စွဲရန် ဖြစ်လာ​​တော့​​မည်ဟု နာမည်​​ကျော် အင်တာနက် ရှာ​​ဖွေ​​ရေး​​ ဝန်​​ဆောင်မှု လုပ်ငန်း​​ကြီး​​က ​​ကြေညာခဲ့​​သည်။ Googleသည် Social Networking ​​လောကတွင် မင်း​​မူ​​နေသည့်​​ Facebookကို ယှဉ်ပြိုင်ရန် Google+ကို အသက်သွင်း​​ခဲ့​​ခြင်း​​ဖြစ်သည်။ စတင်​​ကြေညာပြီး​​ ၂ ပတ်အတွင်း​​ မိမိတို့​​အ​​နေနှင့်​​ သုံး​​စွဲသူ ၁၀ သန်း​​ထိ ရရှိ​​နေပြီဟု Googleက ​​ကြေညာနိုင်ခဲ့​​သည်။
ထိုစဉ်ကတည်း ​​က Google+ အသုံး​​ပြုသူ အ​​ရေအတွက်ကို Googleက တရား​​ဝင် ထပ်မံ​​ကြေညာခြင်း​​ မရှိ​​တော့​​​သော်လည်း​​ ​​လေ့​​လာသူများ​​က တစ်လအတွင်း​​ ၂၅ သန်း​​မျှထိ ရှိလာပြီဟု ယူဆရ​​ကြောင်း​​ သုံး​​သပ်ခဲ့​​သည်။ သုံး​​စွဲသူဦး​​​ရေ တိုး​​ပွား​​လာ​​သောလည်း​​ အသုံး​​ပြုသူများ​​၏ Postတင်မှုမှာ တစ်စထက်တစ်စ ကျဆင်း​​လာ​​ကြောင်း​​ ဩစ​​တြေး​​လျ အင်တာနက် သု​​တေသန ဌာနတစ်ခုက သုံး​​သပ်ခဲ့​​သည်။ သို့​​​သော် ယင်း​​​လေ့​​လာမှုတွင် လူတစ်ဦး​​ချင်း​​စီ၏ ပုဂ္ဂိုလ်​​ရေး​​ Postများ​​ကို ထည့်​​သွင်း​​တွက်ချက်မှု မရှိ​​ပေ။
ယခုအခါ Googleသည် ၎င်း​၏ ​​အောင်မြင်မှုကို ချဲ့​​ထွင်ရန် လူတိုင်း​​အတွက် Google+သုံး​​စွဲခွင့်​​ကို အတည်ပြု​​ပေး​​လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ Google+အရ ကွန်ပျူတာ အသုံး​​ပြု​​နေသူများ​​သည် Screen​​ပေါ်ရှိ အချက်အလက်များ​​ကို မိမိ၏ မိတ်​​ဆွေများ​​ထံ အလွယ်တကူ မျှ​​ဝေ ​​ပေး​​ပို့​​နိုင်သည်။ ​​လေ့​​လာသူ အများ​​စုက Facebookအ​​နေနှင့်​​ Google+ထံမှ ကြီး​​မား​​​သော စိန်​​ခေါ်မှုများ​​ကို ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိ​​ကြောင်း​​ သုံး​​သပ်ခန့်​​မှန်း​​ခဲ့​​ကြသည်။
Google+ တွင် Apps အသစ် ဒါဇင်ကျော် ထပ်မံထည့်သွင်း
ြGoogle+ launchadozen of new Apps
ဆိုရှယ်ဝက်ဘက်ဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google+ မှာ Apps အသစ် ဒါဇင်ကျော် ထပ်မံ ထည့်သွင်းလိုက် ပြီလို့ သိရပါတယ်။
အခြား လူမှုရေး ဝက်ဘ်ဆိုဒ် များထက် ထူးခြားချက်ကတော့ App အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ hangouts vedio chat အသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ Google+ မှ ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့ hangouts vedio chat ဟာ အခြား ဗီဒီယို ချက်တင်များနဲ့ မတူပါဘူး။ သူဟာ တစ်ပြိုင်နက်တည်းကို လူပေါင်းများစွာနဲ့ တွေ့မြင် စကားပြောနိုင် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီ App ကို စမတ်ဖုန်းတွေမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုသူတွေအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ feature အသစ်တွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Google+ ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ Post တွေပေါ်ကို အခြားမိတ်ဆွေများက comment ပေးတဲ့အခါ စမတ်ဖုန်း ဆီကို SMS စာပြန်ပို့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် SMS စနစ်နဲ့ ပဲ Message တွေကို Google+ ပေါ်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Google+ ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ဂိမ်းတွေကို မိုဘိုင်းဖုန်းထဲ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီး ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ Facebook ပေါ်မှာ တောင် မရရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ အချိန်မှာ facebook အသုံးပြုသူဟာ သန်းပေါင်း ၇၅၀ ကျော်ရှိပြီး၊ Twitter ပေါ်မှာတော့ သန်း ၂၀၀ ကျော်ရှိနေပါတယ်။ အသုံးပြုသူ ၁၀ သန်းကျော်သာ ရှိသေးတဲ့ Google+ အနေနဲ့ လူသုံးများလာအောင် App အသစ်များ ပိုမို ထည့်သွင်းလာမယ်လို့ Google ကုမ0x081ပဏီ အင်ဂျင်နေယာ ဒုတိယဥက0x081ကဌ Vic Gundotra မှ ပြောကြားသွားပါတယ်။
Google + အား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်တော့မည်
Google+ for your busniess
လူမှုရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google+ ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အတွက် အသုံးပြုနိုင်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းကတော့ Facebook နဲ့ သိပ်ကွဲပြားခြင်း မရှိပါဘူး။ ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ Page တစ်ခု ဖန်တီးမယ်၊ စားသုံးသူတွေကို မိမိဖန်တီးထားတဲ့Page ပေါ်မှာပဲ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့မယ်၊ ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးကို စားသုံးတွေအတွက် သတင်းအချက်အလက် အချိန်နဲ့ တပြေးညီပေးမယ်၊စသည်ဖြင့် Facebook ပေါ်မှာ page တစ်ခုဖန်တီးသလိုပါဘဲ သိပ်ထူးခြားချက်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာ အားသာချက် တစ်ချို့ရှိနေပါ တယ်။
Business Profile (အချက်အလက်) ကို တိတိကျကျ၊မှန်မှန်ကန်ကန် ထည့်သွင်းမှ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ ကုမ0x081ပဏီ အမည်လွဲမှား သွားတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် ပြင်ဆင်ရခက်ပါ တယ်။ ဒါကတော့ Google+က ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေး စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင် ကုမ0x081ပဏီ အမည်တူတွေကို တွေ့ရလေ့ ရှိတဲ့အတွက် ပြီး၊ မူပိုင်ခွင့်မှာ အားနည်းပါတယ်။ Google+ မှာတော့ ဒီလို ပြဿနာတွေ မရှိလာ နိုင်ပါဘူး။
လက်ရှိ facebook platform ပေါ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ Page တွေရှိပေမဲ့ Google+ က လည်း ပြုလုပ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် စိတ်ဝင်စားလာကြပါပြီ။ အသုံးပြုသူ သန်း ၂၀ ဝန်းကျင်သာရှိသေးပေမဲ့ Google+ ပေါ်မှာ လူဦးရေ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးပွားလာပါပြီ။ ဒီအတွက် Google+ platform ပေါ်မှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း page ပြုဖန်တီးဖို့အတွက် စိတ်ဝင်စားနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
Youtube တွင် 2D မှ 3D ပြောင်းလဲနိုင်ပြီ
YouTube launches 2D to 3D conversion tool
အွန်လိုင်း ဗီဒီယိုဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဖြစ်တဲ့ YouTube ပေါ်မှာ 2D ဗီဒီယို မှ 3D ဗီဒီယိုသို့ပြောင်းလဲ နိုင်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
YouTube ပေါ်မှာ 3D ဗီဒီယို တင်နိုင်တာကတော့ အတော်ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတုန်းက များစွာ အခက်အခဲရှိ ပါတယ်။ special camera တွေရှိရမယ်။ 3D ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အထူး ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲရှိရမယ်။ စသည့်ဖြင့် အခြားအခက်အခဲများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ youtube မှထပ်မံ ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ App တစ်ခု တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 2D to 3D conversion tool ကြောင့် 2D ဗီဒီယိုကိုလဲ 3D အဖြစ် အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲ တင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူအနေနဲ့ 3D မျက်မှန်တော့ လိုအပ်အုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် YouTube မှ အခြား App အသစ်နှစ်ခု ပေါင်းထည့်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါတွေကတော့ Magisto နဲ့ Vlix ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ App နှစ်ခုလုံးဟာလဲ ဗီဒီယိုမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Magisto ကတော့ ဗီဒီယိုကို အလိုအလျောက်တည်းဖြတ်ပေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဗီဒီယို တစ်ခုရဲ့ အကောင်းဆုံး အခန်းကိုရွေးချယ်ပြီး သီချင်းတွေ၊ effect တွေ ပေါင်းထည့်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ တစ်မျိုးကတော့ Vlix ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယို ရဲ့ အစနဲ့ အဆုံးမှာ စာတန်းထိုးပေးပြီး effect တွေ ပေါင်းထည့်ပေးပါတယ်။
YouTube ပေါ်မှာ ဗီဒီယို တင်တော့မယ်ဆိုရင် သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ verification code တွေ ဖြည့်ပေးရပါတယ်။ ဒါမှသာ ၁၅ မိနစ်ကြာမြင့်တဲ့ တင်ချိန်ကို ကျော်လွန်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို YouTube အကောင့်ရှိတဲ့သူတွေ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီုး သီချင်းတွေ ကို နောက်ခံတေးဂီတ အဖြစ်နဲ့ပေါင်းထည့် ပေးခြင်းဟာ ဆင်ဆာမဲ့မဟုတ်ဘဲ၊ တရားဝင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တိုလီမိုလီ IT ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် နည်းပညာ (၈)
ပြတိုက်က သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကျွန်တော်ရဲ့ ဝေငှပေးတာလေးတွေ နည်းနည်း အဆက်ပြတ်သွား
တယ်။ခုတစ်လော ကလေးထိန်း ထမင်းချက် ဂျူတီကျနေလို့ လေ.. အဟေး( ကြွားတာ)။ ကဲစုမိ ဆောင်းမိ
သိမိတာလေးတွေကို အောက်မှာပြန်လည် ဝေငှပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။အသုံးတည့်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း
(၁) USB Fresher (3.97 Mb)
ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိ USB ထဲမှာရှိတဲ့ မလိုအပ်သော Unnecessary Objects များကိုရှင်းလင်း
ဖယ်ရှားသန့် စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုလိုလျှင်တော့ ဒီနေရာမှာ ယူလိုက်ပါ။
(၂) Skip Screen (738 Kb)
ဒီကောင်လေးကတော့ Download ဆိုဒ်အချို့ တွင် စောင့်ရသောအချိန်များအား မိမိစက်အတွင်း Skip
Screen ထည့်ထားခြင်းဖြင့် စောင့်ရသောဒုက္ခကို ကင်းဝေးစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလိုရှိလျှင် ဒီနေရာလေးမှာ
(၃) History Eraser (417 Kb)
မိမိအင်တာနက်သုံးစွဲသည့် ခြေရာလက်ရာများအား မကျန်ခဲ့စေရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။သုံးစွဲ
လိုလျှင်ဖြင့် ဒီနေရာလေးမှာ ယူလိုက်ပါ။
(၄) GTalk Portable (Pink Colour) (3.57 Mb)
ကဲသုံးနေကျ ပုံစံမဟုတ်တဲ့ အလန်းလေးပါဗျာ။ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Portable လေးမို့စတစ်လေးထဲထည့်ယူ
သွားယုံပါဘဲ ။ ဒီနေရာမှာ ယူပါ။
(၅) GTalk Portable (Black Colour) (3.52 Mb)
ဒါလေးကလည်း စတိုင်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ။အကောင့်များများရှိသူတွေ အပေါ်ကပန်းရောင်ကော အောက်က
အနက်ရောင်ပါနှစ်ခုစလုံးဖွင့်ပြီး စိတ်ကြိုက်သာချက်ကြပါတော့လို့ ပြောပါရစေ။ကဲဒီနေရာလေးမှာ ယူလိုက်ပါ။
(၆) WD English To Myanmar Dictonary (1.53 Mb)
ဒီကောင်လေးကလည်း အင်္ဂလိပ်မြန်မာ အဘိဓ္ဓာန်များစွာရှိတဲ့အထဲက WHIZZO PROGRAMMING
SCHOOL က C# Programming သင်တန်းသူ/သားများ စီစဉ်ရေးသားထားတာလေးပါ။ZawGyi ရော Mya-
nmar3နှစ်မျိုးစလုံးနှစ်သက်ရာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အတော်လေးကိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံပါတယ်။ဒီနေရာလေးမှာ
(၇) Angry Birds Rio 1.2.2 (Full) (43.1 Mb)
အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဒီဂိမ်းလေးကတော့ အစ်ကိုတစ်ယောက်တောင်းထားလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ ။
အထဲမှာ Patch ဖိုင်လေးပါပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကို Full လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကို ဒီနေရာမှာNotepad လေး
နဲ့ ရေးပေးထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာ တော့ Main File ကိုယူလိုက်ပါ။
(၈) Photo Shop Study 2011 (670 Mb)
PhotoShop ၀ါသနာရှင်များအတွက် ကိုဂျူနီယာမှတင်ပေးပါရန်ပြန်ကြားပါသောကြောင့် လင့်ချိတ်ပေးထား
Download ******Part-1 /Part-2 /Part-3 /Part-4 / Part-5
ပြတိုက်မှသူငယ်ချင်းများ အိုင်တီအသိ သုတ ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေ။
နည်းပညာလောက အရေးပါခဲ့သော မမများ
တလောက Google ထဲဝင်ပြီး "women in technology" ဆိုတာ ရှာကြည့်လိုက်တယ်။ စိတ်မကောင်းစရာ ရှားပါးလိုက်တာ။ တွေ့မယ့်တွေ့တော့လည်း Maximum PC ထဲ လာတွေ့တယ်။
ခေတ်ဟောင်း၊ ခေတ်နှောင်းကနေ ခုကာလအထိ ကျွန်တော်တို့ မကြားဘူးတဲ့ မမတွေရဲ့ အမည်တွေကို တွေ့လိုက်သိလိုက်ရတယ်။ ဒီ မမ တွေ နည်းပညာ လောကအတွက် ဘာတွေ စွမ်းဆောင် အောင်မြင်ခဲ့ကြသလဲ ကြည့်လိုက်ရင် စိတ်ဝင်စားစရာတွေပဲ။
အမျိုးသမီးတွေဟာ အိုင်တီလောကမှာ သူ့နေရာနဲ့သူ အရေး ပါခဲ့ကြတာ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ကို ဘာကြောင့် အမွှန်းတင်ကြရတာလဲ။
Kay McNulty, Marlyn Wescoff, Fran Bilas, Ruth Lichterman ဆိုတဲ့ အမျိုးလေးယောက်နဲ့ ပုံထဲမှာ မပါတဲ့ Adele Goldstein နဲ့ Betty Snyder ဆိုသူတွေဟာ ပထမဦးဆုံး "computors" လို့ခေါ်တဲ့ ENIAC မှာ စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။
ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ Moore အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမှာ သူတို့ ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ လုပ်ငန်းကိုခေါင်းစဉ် အနေနဲ့ "computer" လို့ပေးခဲ့ကြတယ်။ ပစ်ခတ်မှုစာရင်း၊ ဗုံးကြဲတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို ဒီအမျိုးသမီးတွေက ကွန်ပျူတာနဲ့အတူ တွက်ချက်ပေးခဲ့ကြတယ်။
သူတို့တွက်ချက်မှု အခြေခံစက်ကတော့ ENIAC ကွန်ပျူတာပေါ့။ ဒီအမျိုးသမီး ၅ ယောက်လောက်ဟာ ENIAC ကွန်ပျူတာရဲ့ switch ပေါင်း ၃ဝဝဝ နဲ့ တန် ၈ဝ လောက် ရှိတဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲတွေကို သူတို့လက်တွေနဲ့ ကိုင်တွယ်စီမံခဲ့ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ENIAC ခေတ်ရောက်လာတော့ ယခင် "computors" လို့ခေါ် တဲ့စက်တွေ သိပ်အသုံးမဝင်တော့ဘူး။ Adele Goldstine နဲ့ Betty Jennings တို့နှစ်ယောက်က ENIAC မှာ ပရိုဂရမ်ကို store လုပ်ရတဲ့ တာဝန်ကိုယူရတယ်။
Goldstein ကတော့ ENIAC ရဲ့ မူလ technical menual ကိုရေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ပထမဦးဆုံး ဆော့ဖ်ဝဲ application တွေနဲ့ ပထမဦးဆုံး programming classes တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီ ENIAC မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ WITI Hall of Fame ဆိုတဲ့ဘွဲ့တွေကို ပေးအပ်ချီးမြင့် ဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်။
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး Computer Science (1968, Stanford) မှာ Ph.D. ဘွဲ့ရသူဆိုပြီး အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို ညွှန်းပြကြတယ်။ တကယ်တော့ Sammet ဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်က Mount Holyoke ကောလိပ်ကနေ B.A. ဘွဲ့ကို သင်္ချာဘာသာရပ်နဲ့ ရခဲ့သူပါ။ သူ့ M.A. (သင်္ချာ) ဘွဲ့ကိုလည်း Urbana-Champaign က အီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်ကနေ ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာရခဲ့တယ်။
သူမ တတ်ကျွမ်းထားတဲ့ သင်္ချာပညာနဲ့ ကွန်ပျူတာကို တကယ်အသုံးချနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ IBM ကုမ္ပဏီမှာ ကွန်ပျူတာ language အတွက် ပထမဦးဆုံး စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ သူရေးဆွဲတဲ့ FORMAC ပရိုဂရမ် language ဟာ သင်္ချာဆိုင်ရာ formulas တွေအတွက် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြု လာတဲ့ ကွန်ပျူတာ language ဖြစ်လာတယ်။
IBM မှာ ၂၇ နှစ်လောက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ COBOL ကိုဖွဲ့စည်းတော့ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတယ်။ ACM ကုမ္ပဏီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ၁၉၇၄ ကနေ ၁၉၇၆ အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၉၄ မှာ ACM Fellow အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ Lovelace Award ဆုကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ အခြားအမျိုးသမီး တစ်ယောက်နဲ့အတူ ပူးတွဲရရှိခဲ့တယ်။
အယ်လင်ဟာ B.Sc. ဘွဲ့ကို သင်္ချာဘာသာရပ်နဲ့ ၁၉၅၄ နှစ်မှာ New York State College for Teachers ကျောင်းကနေ ရခဲ့တယ်။ M. Sc. ဘွဲ့ (သင်္ချာ) ကိုတော့ ၁၉၅ရ ခုနှစ်မှာ University of Machigan ကနေ ရခဲ့တယ်။
ကွန်ပျူတာ (compilers, code optimization, parallelization) နယ်ပယ်တွေမှာ အထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်။ IEEE အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ACM နဲ့ ကွန်ပျူတာ သမိုင်းပြတိုက်တွေရဲ့ အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်တယ်။ အယ်လင်ဟာ IBM မှာလည်း တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ IBM အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ IBM မှာ သူ ၄၅ နှစ် လောက်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် NSA အတွက်လည်း ပရိုဂရမ်းမင်း language နဲ့ security code တွေကို ရေးပေးခဲ့သေးတယ်။
သူမဟာ ၁၉၉ရ ခုနှစ်မှာ WITI ရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့၊ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်မှာ Augusta Ada Lovelace ဆုတွေကိုရရှိခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ Turing Award (ကွန်ပျူတာနိုဗယ်ဆု) ကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်အတွက် ပထမဦးဆုံး ရရှိခဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။
ပြင်သစ် မိဘနှစ်ပါးက မွေးတယ်။ ပန်ဆဲလ်ဗေးနီးယား တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းလာတက်တယ်။ ပထမဦးဆုံး ကျောင်းတက်တဲ့နေ့မှာပဲ သူမရဲ့ သင်္ချာပါမောက္ခက သူမကို သင်္ချာဘွဲ့အတွက် အချိန်လာမဖြုန်းနဲ့၊ အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ ကလေးထိန်းလို့ အပြောခံခဲ့ရတယ်။
ဘက်တီဟာ သတင်းစာ သင်တန်းတက်တယ်။ နောက်တော့ သူမကို Moore အင်ဂျင်နီယာကျောင်းက ငှားတယ်။ ဒီကျောင်း ဟာ ပထမဦးဆုံး ENIAC ကွန်ပျူတာကိုသုံးတဲ့ ကျောင်းဖြစ်တယ်။
ပါမောက္ခ အကြံပြုချက် မှားသွားတယ်။ သူမဟာ Programming သုတေသနဌာနရဲ့ အကြီးအကဲ ဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှာ David Taylor Model Basin လို့ခေါ်တဲ့ သင်္ချာသုတေသနဌာနကို သွားပြီး ကူညီတယ်။ UNIVAC ကွန်ပျူတာ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အထောက်အကူတွေ ပေးခဲ့တယ်။
ပထမဦးဆုံး ပရိုဂရမ်မင်းမျိုးဆက် (SORT/MERGE) ကို ရေးခဲ့တယ်။ အမေရိကန်မှာ ၁၉၅ဝ လောက်က ပထမဦးဆုံး စာရင်းဇယားတွေကိုပြုစုတဲ့ ပရိုဂရမ်ဖြစ်လာတယ်။ ဘက်တီဟာ John Mauchly နဲ့တွဲပြီး BINAC ပရိုဂရမ်ကို ရေးတယ်။ အစောပိုင်းပရိုဂရမ် language တွေ ဖြစ်တဲ့ COBOL နဲ့ FORTRAN တွေအတွက်လည်း Grace Hopper နဲ့တွဲပြီး ရေးခဲ့တယ်။
သူမဟာ command တွေကို တီထွင်ခဲ့ရုံမက numeric keypad ကိုလည်း တီထွင်ခဲ့တယ်။ ဘက်တီဟာ ENIAC ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ မူလပရိုဂရမ်မာ ၆ ဦးထဲမှာ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ် တယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ Augusta Ada Lovelace ဆုကို ရရှိခဲ့တယ်။
11. Sister Mary Kenneth Keller
Barbara Liskov ဟာ ကွန်ပျူတာသိပ္ဋံဘွဲ့မှာ ပထမဦးဆုံး Ph.D ဘွဲ့ရသူဆိုပေမယ့် အမှန်တကယ် သူမထက်စောပြီး ကွန်ပျူတာမှာ Ph.D ရခဲ့သူကတော့ စစ္စတာမေရီ ဖြစ်တယ်။ Wisconsin တက္ကသိုလ်ကနေ မေရီဟာ ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာဘွဲ့ရတော့ Dartmouth ကိုသွားပြီးတော့ ကွန်ပျူတာ language (BASIC) သွားသင်ရတယ်။ အဲဒီရာထူးက မူလ ယောက်ျားတွေပဲ စိုးမိုးထားတယ်။
စစ္စတာမေရီဟာ DePaul တက္ကသိုလ်ကနေ BS ဘွဲ့ကို သင်္ချာဘာသာ ရပ်နဲ့ရတယ်။ MS ဘွဲ့ကို သင်္ချာနဲ့ ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်တွေနဲ့ ထပ်ရတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးဖြစ်ပေမယ့် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနဲ့ မဖြစ်မနေ ပတ်သက်လာရတော့တယ်။
''ကျွန်မတို့မှာ information တွေ ကအရမ်းကို ဖောင်းပွလာပြီ၊ အဲဒီ information တွေကို ကျွန်မတို့ အကျိုးရှိအောင် မသုံးနိုင်ရင် အလကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်'' လို့ သူမပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ပြန်ညွှန်းချင်ပါတယ်။
သူမဟာ AI ဘာသာရပ်ကို အထူး စိတ်ဝင်စားတယ်။ သူမထူထောင်ခဲ့တဲ့ Clarke ကောလိပ်ရဲ့ ကွန်ပျူတာဌာနမှာ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ လောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။
ဟူးဗားဟာ Ph.D ဘွဲ့ကို ဒဿနိကဗေဒ၊ သင်္ချာအထူးပြု ဘာသာရပ်တွေနဲ့ ယေးလ်တက္ကသိုလ်က ရရှိခဲ့တယ်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ နယူးဂျာဆီက Bell Laboratories မှာ သုတေသီအနေနဲ့အလုပ် ဝင်လုပ်တယ်။
Bell မှာ အလုပ်လုပ်နေတုန်း ကွန်ပျူတာနဲ့ တယ်လီဖုန်း တွေကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်တဲ့စနစ်ကို တီထွင်ခဲ့တယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ အဝင်ဖုန်းတွေကို စောင့်ကြည့်တဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဟာ call rate တွေကို အလိုအလျောက် ထိန်းပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် overloading မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ သူမရဲ့စနစ်ကို ယနေ့တိုင် သုံးစွဲနေကြရပါသေးတယ်။
ဒီလို စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် သူမရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို ပထမဦးဆုံးမူပိုင်ခွင့်ထုတ်ပေးပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်။ Bell ကုမ္ပဏီကြီးမှာလည်း ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီး ကြီးကြပ်ရေးမှူးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရတယ်။
ဂျုံးစ်ဟာ ကင်းဘရစ်ခ်ျကွန်ပျူတာဌာနမှာ ၁၉၇၄ ကနေ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ သူမဟာ NLP (natural language processing) နဲ့ information retrieval လုပ်ငန်း တွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူမလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးက IDF (inverse document frequency) ဖြစ်ပြီး information retrieval ကိုပြန်ပြီး တွက်ဆတဲ့လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့တိုင် search engine တွေမှာ သူမရဲ့နည်းစနစ်တွေကို အသုံးပြုနေရပါသေးတယ်။ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်မှာ သူမအနားယူတယ်။ ကွန်ပျူတာပါမောက္ခ ရာထူးကနေ အနားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်ကွန်ပျူတာ အသင်းကြီးကပေးတဲ့ Lovelace Medal ကို ပထမဦးဆုံးအမျိုး တစ်ယောက်နေနဲ့ လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိန်ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ပြီး ၁၉၇ဝ နှောင်းပိုင်း လောက်ကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ Acorn Microcomputer ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ သူအဖြစ်ထင်ရှားတယ်။ Acom ကွန်ပျူတာကို နောက်ပိုင်း Acorn System 1 လို့ခေါ်ကြတယ်။ System တွေနဲ့တကွရောင်းချခဲ့ရတဲ့ ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုဖီဟာ ဒီနေရာမှာတင် ရောင့်ရဲမနေပါဘူး။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ Acorn Proton ကွန်ပျူတာတွေထဲမှာ Acorn Atom မှာသုံးတဲ့ BASIC ပရိုဂရမ်းမင်း language ကို ပြန်ရေးပြီး ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Proton ဆိုတာက အခြားကွန်ပျူတာတစ်မျိုး ကို ထပ်ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ Acorn ကွန်ပျူတာတွေထင်ရှား လာပြီး BBC ကတောင်ဆက်သွယ်လာတယ်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ ဆိုဖီဟာ RISC ပရိုဆက်ဆာတွေမှာ ပထမဦးဆုံး instruction တွေထည့် ပေးဖို့ ကြံဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ Acorn RISC Machine ဆိုပြီး ကွန် ပျူတာတွေထွက်လာတယ်။ ARM ဆိုပြီး လူသိများတယ်။ ဆိုဖီဟာ Acorn Replay ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာကိုလည်း ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တယ်။
ဒီကွန်ပျူတာမှာ ဗီဒီယို architecture တွေပါလာပြီ။ ဗီဒီယိုကြည့်နိုင် ဖို့ OS ကိုထည့်ပေးသလို frame rate အမြင့်ဆုံးရအောင်လည်း လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကာလာကို ဂိမ်းဒီဇိုင်နာအနေနဲ့ ၁၉၈ဝ လောက်ကတည်းက Atarti 2600 console ကနေ ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ Atari ကုမ္ပဏီမှာ ဝင်အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးအင်ဂျင်နီယာ နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Carol Shaw လို့ခေါ်ပါတယ်။
Atari မှာ အလုပ်လုပ်နေစဉ် ကာလာ ဝင်ပြီးလုပ်ကိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဂိမ်းတွေကတော့ Indy 500 (1977), Star Raiders (1979) တွေဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၈ဝ မှာထုတ်တဲ့ Dodge 'Em ဂိမ်းနဲ့ ဆုရခဲ့တယ်။ ဒီဂိမ်းက ကားမောင်း ပြိုင်တဲ့ဂိမ်းပါ။
Call of Duty လို့ခေါ်တဲ့ ကားမောင်းပြိုင်ပွဲဂိမ်းဟာ ဂိမ်းသမိုင်းမှာအစော ဆုံးနဲ့ ဂိမ်းလောက ဖွံ့ဖြိုးအောင် အထောက်အပံ့အပေးနိုင်ဆုံးလို့ ဆိုရမယ်။ Warlord ဂိမ်းကိုလည်း လူအများ ကြီးကစားနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ခုတော့ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာရှေ့နေ လုပ်နေတယ်။
သူမရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံးဂိမ်းကတော့ King's Quest ဗီဒီယို ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းခေတ်ဦးမှာ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားအောင် စွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ရိုဘာတာဟာ ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်သူ Ken နဲ့ အတူ ဂရပ်ဖစ် စွန့်စားမှုဂိမ်းပေါင်း ၈ဝ/၉ဝ လောက်ရေးခဲ့တယ်။ Phantasmagoria ဂိမ်းကတော့ သူမအကြိုက်ဆုံးလို့ ဆိုတယ်။
ရိုဘာတာ ဂိမ်းကို စတင်စိတ်ဝင်စားတာ သူ့ခင်ပွန်းကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ သူမကို Don Woods ဂိမ်းနဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုကောင်း အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး တွေရခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် စွန့်စားခန်းကိုအခြေခံတဲ့ Mystery House ဂိမ်းကို သူမကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးရေးခဲ့တယ်။ ဒီဂိမ်းကို အွန်လိုင်းဂိမ်းအနေနဲ့ ကစားလို့ ရအောင် စီစဉ်ပေးလိုက်လို့ ပိုပြီး နာမည်ကျော်သွားရတယ်။
ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီးဗီဒီယိုဂိမ်း ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂုဏ်ပြုရလိမ့်မယ်။ Carla နဲ့ Atari မှာ တွဲလုပ်ဖူးတယ်။ နောက် ပိုင်း Activision ကိုပြောင်းသွားတယ်။ အဲဒီမှာ နာမည်ကျော် River Raid ဂိမ်းကိုရေးခဲ့တယ်။ တကယ့်တန်းဝင်ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်သွားတယ်။ အပစ်အခတ်ဂိမ်း RR ကိုတော့ ၁၉၈၂ မှာထုတ်ခဲ့တယ်။
ရှောက ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ 3-D Tic Tac Toe ဂိမ်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ Super Breakout (1978), Happy Trails (1984) တွေကို သူမပဲရေးခဲ့တယ်။ ရှောဟာ Polo နဲ့ Atari Basic Reference Manual တွေကိုရေးခဲ့တယ်ဆိုတာ လူသိနည်းတယ်။
အင်တာနက်ရဲ့ မိခင်လို့ ပြောရမယ့်သူပါ။ ပါးလ်မင်းဟာ ဆော့ဖ်ဝဲ ဒီဇိုင်နာ၊ network အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ Spanning-tree ဆက်သွယ်ရေး protocol ကြောင့် ထင်ရှားပါတယ်။
သူမတီထွင်ခဲ့တဲ့ spanning-tree ဟာ Digital Equipment Corp အတွက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ သင်္ချာဆိုင်ရာဘွဲ့နဲ့ မာစတာဘွဲ့ကို ရခဲ့တယ်။ Ph.D ဘွဲ့ကို ကွန်ပျူတာသိပ္ဋံနဲ့ MIT ကနေရခဲ့တယ်။ Spinning-tree ဟာ Ethernet local area network အတွက်အခြေခံကျတဲ့ bridge တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပါးလ်မင်းဟာ အခြား network ဒီဇိုင်း၊ link-state protocols ဘက်တွေမှာလည်း ထင်ရှားတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ သူမဟာ ကလေးတွေကို ပရိုဂရမ်းမင်းသင်ပေးဖို့အတွက် TORTIS ပရိုဂရမ် ကို တီထွင်ရေးသားခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။
ပညာရေးဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ် language တစ်ခုဖြစ်တဲ့ LOGO ကိုလည်းရေးခဲ့တယ်။ လက်ရှိ Intel မှာလုပ်နေတယ်။ Sun မှာလုပ်ကတည်းက သူမတီထွင် မှုအတွက် မူပိုင်ခွင့်အမှတ်တံဆိပ် ၅ဝ လောက်တင်ခဲ့တယ်။ Network ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ (text book) တစ်အုပ်ကိုလည်း ရေးခဲ့တယ်။
ENIAC ကွန်ပျူတာကြီးတွေခေတ်က မထင်မရှားနဲ့ အမျိုးသမီး အုပ်စုထဲမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ Northwest Missouri ဆရာအတတ်သင် ကောလိပ်ကနေ သင်္ချာအဓိကနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့တယ်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ ပင်ဆဲလ်ဗေးနီးယားမှာရှိတဲ့ Aberdeen Proving Ground စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်မှာ လုပ်ကိုင်ဖို့ ငှားရမ်းခြင်းခံရတယ်။
အဲဒီမှာ ENIAC ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပရိုဂရမ်မာ Kay McNulty နဲ့တွေ့တယ်။ သူမ ENIAC မှာဆက်လုပ်ရင်း ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တွေကို ထိန်းသိမ်းရသူဖြစ်လာတယ်။ BINAC နဲ့ UNIVAC I ကွန်ပျူတာ နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်။ နောက်ပိုင်း Auerback Publisher မှာ အယ်ဒီတာ ဖြစ်လာတယ်။
စာဖတ်ပါ ၊ စာကိုဘယ်လိုဖတ်ကြမလဲ။ အတွေးမှတ်စုများ (၅)...
အွန်လိုင်းမှ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မည့် Ytalk ဝန်ဆေ...
အီရန်သမ္မတ အမာဒီနီဂျက်၏ လက်ရင်းတပည့် ငွေကြေးအလွဲသုံ...
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ၊ လူ ၂၀၀ ခ...
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲအပေါ် သံသယမရှိကြဖို့ ICG တိုက်တွန...
အသစ်တွေ့ ရှိရသော တွဲဖက်မစားသင့်သော အစားအစာ (၂)မျို...
ဒေါ်လာဈေး ပြန်တက် ၊ မော်ဒယ်မြင့်ကား ဈေးနှုန်းများ က...
အောက်တိုဘာတွင် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်၌ မုန်တိုင်းဖြစ်က ...
ကင်ညာတွင် လောင်စာပိုက်လိုင်း မီးလောင်ပေါက်ကွဲ ၊ ဆယ...
ADSL အင်တာနက်လိုင်း ခြောက်ထောင်ကျော်ရောင်းချပြီးဖြ...
လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးပါက သဘာဝပတ်ဝန်းက...
(၁၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် မြန်မ...
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ဂျီ ၄ သိန်း တိုးချဲ့တပ...
မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူး ကိုယ်စားလှယ် န...
မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ လျှပ်စစ...
ရန်ကုန်မြို့ ရပ်ကွက်တွင်းတရားပွဲ လူငယ်များ ပါဝင်မှု...
ငါးပူတင်းအသဲနှင့် ဥများ စားသုံးမိသဖြင့် မိသားစုဝင်...
နယူးဒေလီ တရားရုံးချုပ်ရှေ့ ဗုံးကွဲ၊ ၁၁ ဦးမကသေ ၊ ပ...
ယခုလ အတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ မုန်တိုင်း တစ်ကြိမ် ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ကိ...
မလေးရှား နိုင်ငံတွင် သေဆုံး သွားသော သားဖြစ်သူ အရို...
အယ်ဂျီးရီးယားအစိုးရ ကဒါဖီမိသားစု တရားဝင်လက်ခံလိုက်...
အသည်းအလှူရှင် အလိုရှိသည်။ ထိုက်တန်စွာ ကျေးဇူးဆပ်ပါ...
ဆယ်လူလာဖုန်းနှင့် ခြင်းဖုန်းများကို ငါးသိန်း GSM န...